नेपाल सरकार देशमा विदेशी वस्तु भित्र्याएर राज्य चलाउने राजस्व खोज्दैछ - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
नेपाल सरकार देशमा विदेशी वस्तु भित्र्याएर राज्य चलाउने राजस्व खोज्दैछ
— डा.कृष्ण प्रसाद आचार्य, प्राकृतिक चिकित्सक
तनहुँको चुँदी रम्घामा जन्मिएका ३१ वर्षीय डा.कृष्ण प्रसाद आचार्य प्राकृतिक चिकित्सक एवं ज्योतिष शास्त्रीको रुपमा परिचित छन् । वनारसको प्रख्यात एक विश्वविद्यालयबाट शिक्षा प्राप्त गरेका उनले प्राकृतिक चिकित्सा र ज्योतिष विज्ञान गरी दुई विधामा पि.एच.डि गरीसकेका छन् । प्राकृतिक चिकित्सा अध्ययन गर्ने क्रममा ज्योतिष परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएका डा. आचार्य प्राकृतिक चिकित्सा ट्रस्टको स्थापना गर्ने तयारीमा जुटेका छन् भने गौशाला गुरुकुल र प्राकृतिक चिकित्सा तथा धार्मिक ट्राभल एण्ड टुर खोलेर व्यवसाय गर्ने पक्षमा समेत उनी रहेका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर अनलाईन प्रविधिबाट समेत ज्योतिषी परामर्श सेवा दिदै आएका उनले एक अनलाईन पोर्टलसमेत सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । प्राकृतिक चिकित्सा विधि नेपाल र नेपालीका लागि हो भन्ने विषयमा उनले लेखेको पुस्तक पनि छिट्टै बजारमा आउने तर्खरमा रहेको छ । आफ्नो पेशासँग सम्बन्धित केही पेशागत संघ संगठनहरु नेपाल ज्योतिष परिवार, युनाईटेड इन्डिया प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय ज्योतिष संघ जस्ता सामाजिक संघ संस्थाहरुमा आबद्ध रहेर सामाजिक कामहरुमा समेत सक्रीयता जनाउदै आएका डा. कृष्ण प्रसाद आचार्य आफ्नो निजी एकल ज्योतिष परामर्श सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान ‘दिव्यज्योति परामर्श केन्द्र’ नामक ज्योतिष परामर्श सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विभिन्न १४ वटा मुलुकहरुको वैदेशिक भ्रमण गरेर प्राकृतिक चिकित्सा विधिको आवश्यकता महशुस गर्दै आएका डा. आचार्यले प्राकृतिक चिकित्सा विधिका लागि नेपाल बढी मूल्यवान भूमि भएको ठहर गर्न पुगेका छन् । प्रस्तुत छ नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको प्रभावको विषयमा डा. कृष्ण प्रसाद आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको केही अंश :
विभिन्न लोकप्रिय आमसञ्चार माध्यमहरुमार्पmत हामीले प्राकृतिक चिकित्सा विधिको चर्चा परिचर्चा गराउने काम गर्ने गरेका छौं । घरदैलो कार्यक्रम गरेर निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराएर यसको प्रभाव बुझाउने कामहरु गर्दै आईरहेका छौं ।
० आजको आधुनिक जीवनयापन गर्ने समयमा यहाँहरु प्राकृतिक चिकित्सा विधिलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर यसको प्रबद्र्धन गर्ने दौडानमा देखिइनु भएको छ, नेपाललाई नै लक्षित गरेर यो प्रणाली व्यवहारमा ल्याउन यहाँहरु पूर्ण रुपमा अग्रसर रहनुको कारण के हो ?
— नेपालमा अत्याधिक रुपमा बिरामीहरु बढिरहेका छन् जसलाई हस्पिटलमा उपचारको लागि लगिन्छ त्यहाँ विभिन्न थरीका औषधिहरु दिईन्छ, पछिल्लो समयमा यसरी गरिएको एलोपेथिक औषधिको नकारात्मक असर देखिदै आएको छ । त्यसलाई निर्मुल पार्नका निमित्त र हस्पिटलको तथा औषधिको महँगो मुल्यको भारबाट गरिब जनतालाई छुट्कारा दिनलाई सरल रुपमा र सुलभ दरमा सेवा प्रधान गर्ने उदेश्यले जल, बनस्पति, माटो, गाईको गहुँत, गोबर जस्ता चिजहरुको प्रयोगबाट बिना औषधि बिरामीहरुको उपचार गर्न सकिन्छ । यसको गहन अध्ययन गरी प्राकृतिक बस्तुहरु जस्तो जल चिकित्सा, बनस्पति चिकित्सा, माटो चिकित्सा, यज्ञ चिकित्साद्घारा विना औषधी रोग निर्मुल पार्ने गरिन्छ । गरिब नपाली जनतालाई विदेशी व्यपारीले आर्थिक विकास गर्ने नाममा नेपालमा भित्र्याएको त्यस्ता घातक उपचार विधिलाई विस्थापित गरी नेपालमा उपलब्ध जडिबुटी तथा अभ्यासको भरमा उपचार हुने प्रविधि स्थापित गर्न हामी नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सा विधिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम यस क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेका छौं ।
० यो विषय जनचेतना जगाउने र यहाँहरुले अध्ययन गरेर प्राप्त गरेको ज्ञानलाई देशभित्र सञ्चार गर्ने कामलाई कुन रुपमा लिदै आउनु भएको छ ?
— हो कुनै पनि प्रभावकारी कुरालाई जनस्तरसम्म पु¥याउन सञ्चार गराउने गर्नु पर्दछ । यसका लागि मैले पहिला एउटा पुस्तक सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छु । यसका अलवा प्रभावकारी आम सञ्चार माध्यमका रुपमा विभिन्न इन्टरनेट सोसियल साईटहरु सञ्चालनमा आईरहेकोमा त्यसको प्रयोगमा हामीले जोड दिईरहेका छौं । विभिन्न लोकप्रिय आमसञ्चार माध्यमहरुमार्पmत हामीले प्राकृतिक चिकित्सा विधिको चर्चा परिचर्चा गराउने काम गर्ने गरेका छौं । घरदैलो कार्यक्रम गरेर निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराएर यसको प्रभाव बुझाउने कामहरु गर्दै आईरहेका छौं । हामी यो मानेमा प्राकृतिक चिकित्सा विधिलाईको सञ्चार गर्दै आईरहेका छौं ।
० प्राकृतिक चिकित्सा विधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सकिने सम्भावनालाई कसरी हेर्दै आउनु भएको छ ?
— हामी विश्वका करिब १४ राष्ट्र भ्रमण गर्दा र आधारभूत प्राकृतिक वस्तुको जीवन शैलीमा पर्ने प्रभावको विषयमा पहिलेदेखि व्यवहारमा ल्याईका तर लोप हुन अवस्थामा रहेका विभिन्न तत्वहरुको बारेमा गरिएको ३ बर्ष लामो अध्ययनले यो विधि नेपाल जस्तो पवित्र भूमिमा एलोपेथिक औषधी र उपचार पद्दति एकदमै अफाप सिद्ध गर्न सफल भएका छौं । प्राकृतिक चिकित्सा विधि बढी प्रभाकारी देखिएको छ । काठमाण्डौ, बुटवल, पोखरा र तनहँु जिल्लामा गरिएको परिक्षणबाट क्यान्सर र एच.आई.भि बाहेक सत प्रतिसत रोगहरु प्राकृतिक विधिबाट निर्मुल पार्न हामी ग्यारेण्टि दिन सक्ने भएका छौं । काठमाण्डौ, बुटवल, पोखरा र तनहँु जिल्लामा लक्षित गरी सेवा ग्राहिलाई सेवा दिने योजनामा रहेका पनि छौं ।
० आम नेपाली सेवाग्राहीहरुलाई यो विधिमा विश्वास गर्न सक्ने बनाउने विषयमा यहाँहरुले कसरी काम गर्दै आउनु भएको छ ?
— हामी एउटा आन्दोलनको रुपमा यो विधि आमनेपालीहरुको घरदैलोमा पु¥याउने तयारी जुटेका छौं । यसका लागि एउटा लक्ष्या निर्धारण समेत भईसकेको छ । यही मुख्य लक्ष्यसहित ‘निरोगी बन’ भन्ने नाराका साथ आन नागरिकका लागि हाम्रो अभियान सञ्चालन हुन गईरहेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुप लिन सक्ने छ । किन भने प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको नकारात्मक असरबाट पीडित बन्न पुगेका अधिकांश विरामीहरु प्राकृतिक चिकित्सा विधितर्पm आकर्षित भईसकेको देखिएको छ ।
० प्राकृतिक चिकित्सा विधि व्यवहारिक बनाउन यहाँहरुले के कस्ता कामहरु गर्नु भएको छ वा बनाउदै हुनुहुन्छ ?— हामी खानपानमा लापार्वाही नगर्न आम उपभोक्ताहरुलाई सचेत गराउदै प्राकृतिक चिकित्सा विधिको प्रभाव प्रस्तुत गर्दै आईरहेका छौं । हालै मात्रै ईन्डियाको देराधुनमा ९ दिने ट्रेनिड्ढमा मान्छेले खाएको सुर्ति, चुरोट जस्ता हानिकारक वस्तुहरुको सेवनमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक परामर्श अभियान चलाइयो । मान्छेको शरीरमा रोग निम्त्याउन सक्ने वस्तुको सेवनबाट सेवनकर्ताको दिसाबाट किरा नै निकालियो । यसैगरी नेपालभित्र ठाउँ परिवर्तन गर्दै विभिन्न समय अवधिको प्रयोग सिविर सञ्चालन गरेका थियौं । विद्यार्थीलाई र अविभावकलाई के खान हुन्छ अमिलो, पिरो, चटपटे, चाउचाउ, चिनी छुट्याएका छौँ र हाम्रो क्याम्पमा १,१ घण्टाको कक्षा चलाएका छौं । यो गरिब, सुकुम्बासी, न्युन वर्गका उपभोक्ताहरुलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरेको कार्यक्रम एकदमै सफल रहेको थियो ।
० नेपालको जडिबुटी र हावापानी अनि माटोबाट प्राकृतिक चिकित्सा विधि अबको दिनहरुमा नेपाली जनमानसले रुचाउछन् भन्ने आधारलाई यहाँले कसरी हेर्दै आउनु भएको छ ?
— नेपालमा ४००० भन्दा बढी प्रभावशाली जडिबुटिहरु उपलब्ध छ । यसमध्ये ५ प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सकियो भने पनि रोग निवारण गर्न सकिन्छ । हाम्रो अध्ययन अनुसार नेपालको माटो यस्तो छ कि यसले शरिरको ७५ वट्टा रोग माटो दल्दा मात्र निको हुन्छ । यस्तै यज्ञ र हवनबाट पनि धेरै रोगहरु निको भएका छन् । हरिया वनस्पतिको धुवाँ सुँघाएरमात्रै १३ वट्टा रोग निको पार्न सकिन्छ । हामीले सुई लगाउन पर्दैन । यस्ता विकल्पबाट हामी रोग निवारण गर्दछौं । यस्तो जडिबुटी भएको देशमा हाम्रा घर वरपर मात्रै कति जडिबुटीहरु त्यतिकै कुहिएर गईरहेका छन् । नेपालमा रहेका प्राकृतिक वस्तुहरु चिकित्सा विधिमा योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, माटो चिकित्सा र जल चिकित्सामा भारतका विज्ञहरु ल्याएर विकास गरेका छौं । यसले राष्ट्र, समाज र नेपालीहरुको परिवारलाई आर्थिक दायित्व वहन गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
० यो विधि सरकारी स्तरबाट जनता समक्ष लैजाने विषयमा यहाँको धारणा के छ ?
हामीले सरकारी स्तरबाट पनि यो विधि आम नेपालीमाझ लैजाने संभावना देखेका छैनौं । किनभने सरकार विदेशी वस्तु देशमा आयात गरेर त्यसको राजस्व उठाएर देश चलाउने मानसिकतामा रहेको देखिन्छ । हामी विदेशी वस्तु नेपालमा आयात गरिनु हुदैन भन्ने अभियानमा जुटेका छौं । विदेशी वस्तु आयातका कारण आज देश पुरै घाटामा चलेको चिन्ता हामीमा रहेको छ ।
० नेपालबाट चिकित्सा अध्ययन गर्ने गराउने नाममा निकै ठूलो चलखेल र राजनीति हुने गरेको देखिन्छ, साथै यस्तो चलखेलबाट एउटा डाक्टर उत्पादन गर्न आधा करोड भन्दा बढी धनराशी विदेशिएको छ अनि त्यही अनुपातमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपचार उपकरण र औषधि भित्र्यादै छ । यो विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
— यो प्राकृतिक सम्पतिको श्रोत अथाह भएको देशलाई पछाडि पार्न जालसाझी गर्न लागेका विदेशी तत्वहरुको ललाई फकाई हो भने आम नेपालीहरु बुझ्न जरुरी छ । जो मानिस ५०÷६० लाख रुपैया खर्च गरेर एमविविएस पढेर डाक्टर बन्छ्, त्यो बेकार हो । हामी बिना पैसा, थोरै लगानीमा हामीले लिएको शिक्षा दिन तयार छौं ।
० यहाँले नेपालीहरुले स्वास्थ्य लाभको संभावनाको विषयमा के कस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ जस्तो यहाँले महशुस गर्दै आउनु भएको छ ?
— आम नेपालीहरुले आपूmलाई कसरी बुझुन् भने हामी नेपालीहरु विश्वमा एउटा विरताको पहिचान बनाउन सफल छौं । अहिले विश्वका मानिसहरु योगाको पछाडि दौडिरहेका छन् । यो हाम्रो देशको वास्तविक वस्तुस्थितिमा आधारित र हाम्रो प्राकृतिक श्रोतको समुचित उपयोग हुने समय अनुकुल रहेको छ । यसबाट अब हामी उपचार पद्दतिको नाममा देशबाट बाहिरिएको ठूलो धनराशी नियन्त्रण गर्न सफल हुन सक्छौं भन्ने मैले ठानेको छु । हामी को हौं ? हाम्रो घर कहाँ छ ? भनेर हामीले आपूmलाई राम्ररी चिन्न सक्नु पर्छ । किन की म नेपाली हुँ, हाम्रो मौलिकता र संस्कार पूर्व ऋषिमुनीहरुको उपदेश के थियो ? भन्ने बारेमा हामी निकै भाग्यमानी छौं । यो हाम्रो परापूर्व कालको संस्कृतिले औंल्याएको कुरा हो । जुन पाश्चात्य मुलुकका जनताले यस्तो संस्कृतिमा रमाउने र उपभोग गर्ने मौका नै पाएनन् । जति बेला संसारले बोल्न नजान्दा, खान र भाषा नहुँदा पनि नेपाल विकास भई सकेको थियो । विश्वकै मुल भाषा संस्कृत भाषा हो । यो नेपाली पवित्र भूमिबाटै उत्पति भएको हो । संसारले बोल्न, खान र हिड्नका साथै जीवन शैली सन्तुलित बनाउने सिकाउदै आधुनिकताको लवज ल्याएको छ । योभन्दा हामी धेरै अगाडि छौं । हामी अहिले जुन संस्था संञ्चालन गरिरहेका छौं त्यो संस्थाले अब यही कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा विस्तार गर्दै लैजाने छ । हाम्रो मुल सिद्धान्त पनि हाइट एण्ड लाईट हो । हाइट भनेको सगरमाथा लक्ष्य हो र लाईट भनेको वेद व्यास र भगवान गौतम बुद्धको ज्ञान प्रचार गर्नु हो । यही कुरा विश्वभर फैलिएको योगाभ्यास हो । यसका लागि योगासँग जोेडिएकाहरु नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सा विधि अपनाउने भ्रमण गर्न आउने छन् । यसले नेपालमा विदेशी मुद्रा ठूलो मात्रामा भित्रिन सक्नेछ ।
० नेपालीहरुले यस्ता कुरा बुझ्न सकेका छैनन् नी ?
— विदेशी उत्पादनको बजार आक्रमक रुपमा नेपालमा विस्तार हुनुको नतिजा नेपालीहरुमा अनेक प्रकारका दीर्घकालीन् रोग बढ्नु, इच्छाशक्तिमा ह्रास आउदै नागरिकहरुमा मानसिक चिन्ता बढेर उपचार विधिमा नै संकट उत्पन्न हुदै जानु । दैनिक जीवनमा खर्चको मात्रा अत्यधिक बढेर जनजीवन नै समस्याग्रस्त हुदै जानु । अहिले हाईब्रेडको उत्पादनको नाममा उपभोक्ताहरुमाझ आएको उपभोग्य वस्तुहरु निकै नै हानिकारका सिद्ध हुदै गएका छन् । दुधालु गाईको रुपमा हामी माझ अप्राकृतिक रुपमा जन्माईएको गाई वस्तुहरुबाट उत्पादित दुग्ध जन्य पदार्थहरु सेवनका कारण क्यान्सर, सुगर र ब्लड प्रेसर जस्ता डर लाग्दो रोगहरुको शिकार यहाँका उपभोक्ताहरु समेत भईसकेका छन् । नेपाली गौमाता भनेर हामीले पूजा गर्दै आएको नेपाली स्थानीय गाईहरु लोप हुदै गएर डेड दर्जन प्रजातिका गोरुका विर्यहरुबाट कृतिम गर्भाधान गराएर जन्माइएका जर्सी गाईहरुको दुग्ध सेवन उपभोक्ताहरुका लागि निकै खतरा सावित भएको एउटा सर्वोच्च अध्ययनले देखाएको छ । यसको प्रमाण हामीसँग पनि सुरक्षित छ ।
० अन्त्यमा केही भन्नु हुन्छ ?
— अब हामी नेपालीहरुले गाई पालन गर्दा दुधको परिमाण मात्रै धेरै खोजेरभन्दा पनि लोकल गाईबृद्धि गरेर नेपाली आम जनमानसमा नेपाली गाईको महत्व बुझाउन सक्नु पर्ने बेला आएको छ । यस्ता गाईको दुधबाट ७५ थरीका विभिन्न किसिमका रोगहरु निवारण हुन सकेका उदाहरणहरु पनि हामी देखाउन सक्छौं । गाई गोरु चर्न जादा उनीहरुले सेवन गर्ने घाँसमा विषादी नै परेको भए पनि लोकल गाई तथा गोरुको ह्याकुल्लाले अमृत बनाएर सेवनयोग्य तत्वहरु छान्नका लागि जालीको काम गर्न सक्छ । ती गाई तथा गोरुहरुमा हुने जुरोको अर्थ पृथ्वीमा सिवलिंगको आकृति हो र यसले भूमिमा दैविक शक्ति प्रदान गरेर मानिस र प्राणीहरुको सुरक्षा दिनु हो । हाईब्रेडको नाममा ल्याइएको बीजलाईभन्दा परापूर्व कालदेखिको नेपालीहरुले व्यवहारमा ल्याउने गरेको बीच बिजनलाई संरक्षण गर्दै विउ बिजनको तत्व बृद्धि गर्न तत्पर रहन म आम नेपालीहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
कपाल झर्ने समस्याको घरेलु समाधान